Furaashka ilaaliyaha Furaashka
Maxaad Ugu Baahan Tahay Bathrobe?
Martida guriga ayaa ku siin kara booqasho dheer. Waad iska ilaalin kartaa qashin ka soo baxa musqusha ilaa qolkaaga markaad kabo u diyaarsan tahay. Dharka dharka lagu maydho oo muddo dheer kugu filan in lagaa daboolo ayaa ah xalka ugu habboon qaraabada aan fahmin baahidaada asturnaanta. Qubeys dheeraad ah gacanta ku hay h ...
Muxuu sameeyaa ilaaliyaha furaashka?
Kaaliyaha joodariga ayaa fuliya afar waxyaalood: Joodariga wuu nadiifiyaa. Jirka bini-aadamku guud ahaan wuu wanaagsan yahay. Dhamaanteen waan wada dhididnaa habeenkii. Dhamaanteen waxaan saliida kasoo saareynaa haragayaga. Qaarkeen baa qurxiya. Dhamaanteen waxaan sidoo kale daadineynaa unugyada maqaarka ee dhintay. Waxaa jira howlo kale oo soo saari kara “bar qoyan” ...
Waa maxay Gargaaraha barkinta maxaadse ugu baahan tahay mid?
Markay tahay gogosha, qaar badan waxay diiradda saaraan go'yaasha iyo barkinta lafteeda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qayb muhiim ah oo ka mid ah gogoshaada gogosha oo dheereyn kara nolosha barkintaada: barkin difaacaha. Barkimado barkinta difaaca ayaa xirta, iyadoo bixinaysa caqabad ka dhan ah xasaasiyadaha caadiga ah si aad u dareento ...